‘न्याय चाहिए रवि लामिछाने, विकेट चाहिए सन्दिप लामिछाने’ – आफ्नो समाचार
‘न्याय चाहिए रवि लामिछाने, विकेट चाहिए सन्दिप लामिछाने’
Afno News — ९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १३:१८0comment
देशमा केहि न केहि चासो को विषय बनिरहेको हुन्छ । फेसबुक चलाएर फेसबुक कै चर्चादेखि तरकारी बेच्नेसम्मको चर्चा हुने गरेको छ ।
अहिले चर्चामा छ, लामिछाने । पछिल्लो समय युवाहरु देश हाक्ने पनि लामिछाने चाहियो भन्नेहरु पनि छन् । किनकी सन्दिप लामिछाने र रवि लामिछाने जस्ता चर्चाका पात्र राजनितिमा नभए कै हो त ? यस्ता प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा भित्तामा ठोकिने गरेको छ ।
पत्रकारिताबाट समाज परिवर्तन गर्न चाहाने रवि लामिछाने निकै चर्चामा छन् । उनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्ने दर्शकको सँख्या बाक्लै छ । अनियमितता, भ्रष्टचार, लुकीछिपी कारोबार, मिलेमतो काम लागायतका थुप्रै विषयको चिरफारमा व्यस्त रवि लामिछानेको फलोवर पनि राम्रै छ । अहिलेसम्म फेसबुकमा दुई लाख २९ हजारको हाराहारीमा फलो गर्नेहरु छन् । कोही पत्रकारहरु नामका लागि पत्रकारिता गर्छन् भने कोही नामका लागि । तर रवि लामिछाने नाम, काम र सकरात्मक परिवर्तनका लागि पत्रकारित गर्छन् भन्दा फरक नपर्ला ।
त्यस्तै नेपाली क्रिकेटको ईतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामे छैन । तर छोटो समयमा नै नेपाली क्रिकेटले फड्को मारेको छ भने । नेपालको उदयमान खेलाडी सन्दिप लामिछानेको चर्चा पनि उतिकै छ । १७ वर्ष मात्र पुरा गरेका सन्दिप अहिले विश्व क्रिकेटका हस्तीहरुसँग खेलेर भर्खरै नेपाल आएका छन् । उनले बलिङ गरेको आईपिएल खेलमा विश्व चर्चित खेलाडीहरु पनि केन्द्रित थिए भने खुलेरै प्रशंसा गर्नेहरुको लाईन पनि राम्रै थियो । यतिको उमेरमा कन्फिडेन्टका साथ गरेको बलिङ देखेर धरै क्रिकेट प्रेमीले उनको प्रशंसा गरेका हुन् । उनको पनि एक लाख ७० हजार फलोवर रहेका छन् ।
नेपाली दुई युवाहरुको लगनशिलता, सकृयता र जिम्मेवारी देखेर फेसबुकमा नयाँ उखान आएको छ । ‘न्याय चाहिए रवि लामिछाने, विकेट चाहिए सन्दिप लामिछाने’
कोरियामा थप नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा छलफल सम्पन्न
वि.सं. २०७५ भाद्र ०७ गते बिहीबारको राशिफल
सांसद कोमल वलीको तीज गीत सार्बजनिक(भिडियो)